Ikhonkco elingaphantsi kweZakhiwo zoKwakha ezisebenza ngokumangalisayo kakuhle | Martech Zone
Amacebo oKwakha angaphantsi kweKhonkco asebenza ngokumangalisayo ngokuLungileyo
NgoLwesine, Aprili 16, 2020 NgoLwesine, Aprili 16, 2020 UOscar Florea
Abathengisi bedijithali baxhomekeke kulwakhiwo lwekhonkco njengesicwangciso esiliqili ekusebenzeni kweinjini yokukhangela (i-SEO) yokunyusa umgangatho wabo wephepha kumaphepha eziphumo zeinjini yokukhangela (ii-SERPs). Ngabathengisi abasebenzela ukufumana i-backlinks kunye nokuphucula ukugcwala kwesiza, ukuvelisa isikhokelo, kunye nokufezekisa ezinye iinjongo, bafundile ukubuyela kwiindlela ezininzi ezithandwayo kwibhokisi yezixhobo zabo.
Ikhonkco elingasemva likhonkco elinokucofa ukusuka kwindawo enye ukuya kweyakho. Iinjini zokukhangela ezinje ngeGoogle zisebenzisa i-backlinks ngaphakathi kwe-algorithm yazo. Iindawo ezifanelekileyo ngakumbi ezinxibelelana nomxholo, iinjini zokukhangela ezidumileyo zikholelwa ukuba ziyiyo. Ngenxa yoko, baya kuzibonisa ngaphezulu kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela (ii-SERPs).
Yintoni ikhonkco lokwakha?
Ikhonkco lokwakha yinkqubo apho abahlalutyi beenjini zokukhangela bajonge i-backlinks yeendawo ezifanelekileyo nezikhuphisanayo, kwaye bamisela isicwangciso sokuzama ukufumana ikhonkco kwindawo ekujoliswe kuyo ibuyele kweyabo. Ngomzamo owoneleyo, kunye ne-backlinks efanelekileyo, iwebhusayithi inokunyusa isikhundla sayo kwimigaqo ethile kunye nokubonakala kweinjini yokukhangela kwindawo yayo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuqokelela amakhonkco kwiindawo ezivulekileyo, ezigaxekileyo, okanye ezingahambelaniyo zinokuqhuba umgangatho wakho-ke ulwakhiwo lwekhonkco kufuneka lujolise kwiindawo ezifanelekileyo, ezikumgangatho ophezulu.
Zithini iindlela zokudibanisa?
Qhagamshela iindlela zokwakha njengokuthumela iindwendwe (apho umxholo wokuqala wenziwe ngobunkokeli bokucinga kwiphepha elahlukileyo ngaphakathi kwishishini), ukwakhiwa kwekhonkco elaphukileyo (ukubuyisela i-backlinks efileyo kunye nomxholo ongcono), kunye ne-skyscraper (ukuhlaziya kunye nokuhlaziya umxholo okhoyo omtsha kunye ophezulu- i-backlinks ezisemgangathweni) ziye zaba ziindlela ezenziwayo kushishino ngokusebenza kwazo ngokugqibeleleyo.
Nangona kunjalo, njengoko ukuthengiswa kwedijithali kuqhubeka ukuxhaphaka, abanini besiza abaninzi kunye nabaphathi bewebhu baqala ukukhukula ngezicelo ezifanayo, ukunciphisa amathuba okuba izicelo zakho zamkelwe. Ukuze uhlale phambili kukhuphiswano, isenokuba lixesha lokujonga ngaphantsi qhagamshela amaqhinga okwakha (QAPHELA: Leyo yindawo yangasemva!) Esebenza ngokufanayo-okanye mhlawumbi ingcono-kunabalingane abadumileyo.
I-infographic engezantsi (QAPHELA: Isicwangciso-qhinga sokwakha ikhonkco!) Yabelana ngeendlela ezithile ezingasetyenziswanga: udliwanondlebe, iphepha lezixhobo, amakhonkco amaqabane, Nceda iNtatheli (HARO), Ukubuyiselwa komfanekiso, amakhonkco eprofayili, ukudibanisa ngaphandle / i-ego bait, isakhiwo sekhonkco se-2-tier, kunye nemicimbi yeendaba.
Ngoluhlu lwabaqalayo ekuphumezeni kwinqanaba eliphakathi, iqhinga ngalinye lixoxwa kunye noluhlu lweendlela ezifanelekileyo ezikunceda ufumane i-backlinks ngokulula.
Kuxhomekeka kwiimfuno zakho, ungasebenzisa enye okanye indibaniselwano yezi ndlela zonxibelelwano ukuze wandise inzuzo yakho yentengiso. Unokuphumeza la maqhinga ukongeza kwiindlela zakho ezaziwayo zokunxibelelana, ukuvumela ukuba ufikelele kwiinjongo zakho ngcono.
Ukuhamba phambili kwepakethi kumaphepha eziphumo zeinjini yokukhangela (ii-SERPs) kunokuba ngumceli mngeni, kodwa ngeendlela ezifanelekileyo kunye nezicwangciso, unesiqinisekiso sokuhambisa iziphumo ezingcono nezisebenzayo. Ukuza nesicwangciso esifanelekileyo kwiimfuno zakho ngumcimbi wokuzama izinto ezintsha kunye nokubona oko kusebenza kakuhle. Thatha ithuba lokuyila ngeendlela zakho zokwakha ikhonkco usebenzisa iindlela ezingezantsi.
tags: kukunikaiziqulatho zomxholoIsithiyelo se-egoncedisa intathelikwenziwa kanjaniUkubuyiselwa komfanekisoukudibanisa isakhiwoamakhonkco amaqabaneq & aimibuzo kunye nezimpenduloisakhiwo senqanaba lesibiniispiralytics
UOscar unjalo I-Spiralytics ' ubulumko Ingcali ye-PR ekwi-Intanethi. Izakhono zakhe zokwakha ubudlelwane ezibalaseleyo ziye zaqaqanjiswa yiminyaka yamava enceda iinkampani kuzo zonke iintlobo zamashishini ukulawula umfanekiso wazo. Lo mfo utya ubuchule bokufikelela kwisidlo sakusasa!
Uyenza njani intengiso yevidiyo ye-Instagram ekufumanela iziphumo
Izicwangciso eziQokelelweyo zeDatha zenza iiNtengiso zeNtlalontle zenqanaba leJedi